Global Voices teny Malagasy » Amerika, Nitia Anao Aho · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Novambra 2016 9:04 GMT 1	 · Mpanoratra Omar Mohammed Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Fifandraisana iraisam-pirenena, Foko sy Fiaviana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Ny Tetezana - The Bridge
Niraikitra lalina ny fitiavako an'i Amerika. Tahaka ny maro indray mihira amiko, nihalehibe tao anatin'ny fijerena sarimihetsika amerikana, nandihy tamin'ny hirany, namaky ny mpanoratra ary nilalao ny fanatanjahantenany aho. Ny marina, nanana fiantraikany lalina tamiko io firenena io ka lasa mpamoaka vaovao aho, tamin'ny ankapobeny, noho ny sarimihetsika amerikana iray. Fony aho 14 taona, nahita an'ilay mahafinaritra Denzel Washington nilalao an'i Gray Grantham tamin'ny “The Pelican Brief ” aho. Tantaran'ilay mpanangom-baovao tsy manan-tahotra, izay nampian'ilay mpianatra lalàna Julia Roberts, namoaka ny tsikombakomba ratsin'ilay ratremaben'ny solika miaraka amin'ny mpitsara namany sasantsasany miezaka ny mamely ny Fitsarana Tampon'i Etazonia hiarovany ny tombontsoany. Raiki-pitia tanteraka aho tamin'izany. Raha haka tahaka an'i Method Man , “Toy ny nahita aho, io ny marina, adinoy ny zavatra hafa rehetra, izany no tiako atao amin'ny fiainako.”
Ary vao maika nanamafy ny fankamamiako an'i Etazonia ny taona niainako tao Arizona. Te-hiteny amin'ny olona aho, “America ihany no firenena tokana nahitako ny fanekena ny fahatongavan'ny fimaroana handraisana ny maha-ianao anao ary vetivety ny andraisan'olona anao ho ao anatin'ny fiaraha-moniny sariaka.” Efa nanoratra taratasim-pitiavana , teny maro hanambarana ny fahalehibiazany.
Efa maro ny voasoratra momba ny fankahalana vahiny sy fanavakavaham-bolonkoditra  avy amin'ity lehilahy ity. Ho ahy, ny zavatra mahavariana ahy indrindra tamin'ny fisongadinany dia ny fomba nandraisany mora ny fomba fijeriny mitongilana. Tsy manao teny ambadika , izy hiviliana amin'ny fehezanteny iray fa tena mahitsy  ny teniny araka ny nolazain'ny mpiara-miasa taloha iray izay, ary aharihariny  ny fanivaivany ny Miozolomana, ny Latinos, ny Afrikana-Amerikana ary ny vehivavy.
Ary dia mamaly amin'ny fironana fifidianana azy ny olona. Ny vato 13 tapitrisa  azony tamin'ny fifidianana savaranonando tao amin'ny Antoko Repoblikana no isa ambony indrindra azon'ny kandidà iray ho solontenan'ny antoko teo amin'ny tantara.
Tamin'ny 8 Novambra 2016, Amerikana mihoatra ny 50 tapitrisa, fotsy hoditra ny ankamaroany , no nanolotra ny prezidansa ho an'ny lehilahy iray, na dia—na, noho ny—tsy fitiavany izay tsy fotsy hoditra.
Angamba. Saingy tsy misy ny afa-miala, araka ny nitenenan'i David Remnick azy , ny halozàn'ny fanapahan-kevitra hanandratra olona iray feno fanivaivana ireo olona tsy mitovy aminy.
Ao anatin'izany rehetra izany, nieritreritra an'i Khizr Khan, rain'ilay miaramila maty tany Iràka aho, sy izay nolazainy raha nanantomotra ny fifidianana. Tamin'ny fivoriana iray ho fanohanana an'i Hillary Clinton, nanao andiam-panontaniana sy valiny tamin'ny vahoaka nanatrika teo Atoa Khan .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/14/91856/
 nanoratra taratasim-pitiavana: http://qz.com/422946/america-i-love-you/
 fankahalana vahiny sy fanavakavaham-bolonkoditra: http://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-racist-examples_us_56d47177e4b03260bf777e83
 teny ambadika: https://en.wikipedia.org/wiki/Dog-whistle_politics
 vato 13 tapitrisa: http://www.politifact.com/north-carolina/statements/2016/jul/08/donald-trump/donald-trump-set-record-most-gop-primary-votes-eve/
 fotsy hoditra ny ankamaroany: http://www.nytimes.com/2016/11/10/us/politics/donald-trump-voters.html
 David Remnick azy: http://www.newyorker.com/news/news-desk/an-american-tragedy-donald-trump
 andiam-panontaniana sy valiny tamin'ny vahoaka nanatrika teo Atoa Khan: http://www.nytimes.com/2016/11/07/us/politics/khizr-khan-hillary-clinton-new-hampshire.html